DC motors yekutengesa yakachipa mutengo
Mhando DC Motors And Applications Yavo
Mhando DC Motor
Motokari yeDC ine zvakawanda zvekushandisa mundima yanhasi yeenjinjini nehunyanzvi. Kubva dzemagetsi shavers kuti motokari - DC Motors vari kwose kwose. Kuti tigutse zvido izvi siyana mafomu - rakasiyana-siyana DC Motors anoshandiswa zvichienderana applicaition.
Series manyawi DC Motor
Kana iri yakateedzana ronda yekuzvifadza DC mota kana kungoita dzakateedzana ronda DC mota, iyo yese armature yazvino inoyerera kuburikidza nemunda ichitenderera seyayo yakabatana mune akateedzana kune armature ichitenderera. Imwe-chikamu chikamu chakateedzera mota mota idzo dzave kushandiswa zvakanyanya. Zvakanakira izvi zvinokonzerwa nekumhanya kwazvo, hombe yekutanga torque, saizi diki, kurema kureruka, nyore kuvhara, uye akasiyana siyana ma voltages anoshanda. Nzira yekumhanyisa kumhanya, yakapusa uye nyore kuita Mune yakateedzana ronda DC mota, kumhanya kunosiyana nemutoro
Compound Kushambadza DC mota
Remubatanidzwa excitation mamirire mu DC mota inogona kuwanikwa nekubatanidza mashandiro hunhu hwese iyo shunt uye nhevedzano inofadza DC mota. Kufadza kwekomboni ronda DC mota inogona kuve yemhando mbiri zvichienderana nehunhu hwekusanganisa, Kuwedzera komputa DC mota uye musiyano mukomboni DC mota. Komputa-inofara DC motors ine yakasimba kushanda uye inowanzo shandiswa mukati zvikepe, trolleybuses, uye vachisimudza midziyo kuchera.
The oga manyawi DC Motor
The yoga manyawi motokari runobva kuna DC injini, izvo zvinoreva kuti excitation coils uye armature ichitenderera pamusoro injini zvakaparadzana Motors, uye excitation pari inopiwa choga, pasinei armature ano. Iko kuchenjerera kumhanya uye armature kumiswa kwemhepo yakasarudzika mota inoenderana neiyo simba neane maviri masimba magetsi. Iyo inopatsanurana yekumusoro simba remagetsi yemotokari yakasarudzika inonakidza inoita kuti michina ive yakaoma. Zvisinei, injini ichi ane zvakawanda zvokufambisa uye kunyanya kushandiswa chikuru injini Towing.
Anogara Magnet DC mota
Permanent magineti DC Motors inogona rakakamurwa zvachose magineti brushless DC Motors uye zvechigarire magineti sokusingaitiki DC Motors kana pasina brushes. Permanent magineti DC Motors vari zvinowanzoshandiswa siyana inotakurika zvemagetsi kana namano midziyo yemagetsi, dzakaita serekodhi, VCD vatambi, vatambi vemateki, massager emagetsi, uye matoyi akasiyana siyana, uye zvakare anoshandiswa zvakanyanya mumotokari, midhudhudhudhudhudhu, maomarara emagetsi, mabhasiketi emagetsi, uye mabatiji emotokari, zvengarava, zvemitambo, zvemuchina uye zvimwe maindasitiri zvakawandisa rakashandiswa vamwe soro-mugumo akaoma zvigadzirwa, akadai mavhidhiyo copiers, makamera, mobile phones, zvakarurama muchina maturusi bhengi mari counter, uye mari bundling michina.
Tarisa All Projekiti
Boka Redu Rechikwata
Chakanakisa tekinoroji chekusimudzira timu haigoni kungounza hupenyu kune bhizinesi, asiwo kutyaira nekukurumidza kukurudzira kweindasitiri neye indasitiri. The kambani ane entrepreneurial chikwata anoumbwa vakadzidza zvikuru uye zvikuru vanokwanisa vashandi, akaita akazviunganidzira vapfumi operative ruzivo, uye vakaumba yesayenzi Kwevadzidzi. The nhengo dzechikwata vaduku uye azere simba, nzira itsva uye akashinga kusangana nematambudziko. Ndiine pfungwa yakanaka yebasa rezvemagariro, ndingada kubatsira mukuvandudza mamiriro eChina Magetsi.
Tiri kambani runobereka Siemens akatevedzana zvigadzirwa. Kambani rakaumbwa muna 1995, pashure pemakore kukura, boka akunda vavimbe makuru wakaiswa vatengi kuburikidza yepamusoro zvinhu uye mabasa akaisvonaka. Iko kugutsikana kwevatengi vedu nezvigadzirwa zvedu ndiyo sosi yedu huru yesimba, uye iyo yakagadziriswa vatengi sosi inoratidzawo kuvimbika kwezvigadzirwa zvedu. Makore akawanda kugadzirwa ruzivo ndiko kukupa zvinhu zvakanaka.